प्राधिकरणमा कुलमानका चार वर्ष : झण्डै डुबेको संस्था खुद नाफामा – EKalopati
प्राधिकरणमा कुलमानका चार वर्ष : झण्डै डुबेको संस्था खुद नाफामा
३० भाद्र २०७७, मंगलवार १८:०९
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सार्वजनिक संस्थानमा को कसले राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउँछ भन्ने कुराको चासो आम मानिसलाई हुँदैन । ती संस्थामा पुग्ने मानिस कोही चर्चाको शिखरमा पुग्ला वा नपुग्ला त्यो कर्मले निर्धारण गर्दछ । नागरिकलाई सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले जनतालाई सेवा दिएको र नाफा कमाएको पाउनसमेत मुस्किल छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण हेर्ने हो भने त्यस्ता संस्थाहरु केवल खर्चका भारी मात्रै बनिरहेका छन् ।
सही व्यक्ति छनोट गर्दा सरकारी संस्थान पनि नाफामा जान सक्छ, आम मानिसको नजरमा पर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेको छ, प्राधिकरण । सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिँदा कुनै समय झण्डै रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानी व्यहोरेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सम्म आइपुग्दा झण्डै रु ११ अर्ब नाफा गरेको छ ।
कार्यावधि यही भदौ २९ गते सकिए पनि प्राधिकरणले मंगलबार विदाई समारोहको आयोजना गर्‍यो । बिदाइ समारोहमा सहभागी अधिकाशंले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पहिलो सत्रमात्रै सकिएको भन्दै चाँडै नै उनी पुनः कार्यकारी निर्देशक भएर आउने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । आम मानिसको चाहना छ, सक्षम व्यक्ति पुनः दोहोरिऊन् र संस्थालाई थप सबल बनोस् ।
प्रणालीमा वार्षिक विद्युत् चुहावट २५/७८ प्रतिशत थियो, करीब ६३ प्रतिशत जनता मात्रै ग्रिडको विद्युत् पहुँचमा थिए । सरकारले घिसिङलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी पनि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउने र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै थियो । सो कार्यमा घिसिङले राम्रो नजिता निकाल्नु भएको छ ।
आधिकारिक कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले घिसिङको पुनः नियुक्तिका सन्दर्भमा देखिएको कानूनी जटिलता फुकाएरै भए पनि एकाध दिनमा नै पुनः नियुक्ति पाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उज्यालो र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएको वर्तमान सरकारले एकपटक घिसिङलाई नै प्राधिकरणको जिम्मा दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
कोरोना : देशभर कति संक्रमित आईसीयूमा ? कति भेन्टिलेटरमा ?
भोलिदेखि लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान खुल्ने